Sanataro Mareykan ah oo mas’uuliyada dilkii Khashoggi dusha u saaray binu salmaan – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaSanataro Mareykan ah oo mas’uuliyada dilkii Khashoggi dusha u saaray binu salmaan
Sanataro Mareykan ah oo mas’uuliyada dilkii Khashoggi dusha u saaray binu salmaan
Hiiraan Xog, Sanatarada dalka Mareykanka ayaa waxay sheegeen in imika in ka badan sidii hore ay u rumaysan yihiin in dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed Bunu Salmaan uu door ku lahaa dilkii wariye Jamal Khashoggi.
Weerar dhanka afka ah oo uu Sanatar Lindsey Graham ku qaaday dhaxalsugaha ayaa waxa uu ku sheegay “in kalsooni sare uu ku qabo” uu ku lug lahaa dilka wariye Jamal Khashoggi.
Sanatarka ayaa ku tilmaamay boqortooyada Sacuudiga in ay yihiin “kuwa waalan oo halis ah”,.
Maxay yiraahdeen sanatarada?
Xubnaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka Sanet-ka lama aysan gabban erayadooda ka dib markii ay la kulmeen agaasimaha hay’ada CIA Gina Haspel.
Sanatar Bob Menendez, oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa dhankiisa wariyayaasha u sheegay “in uu imika ku qanacsan yahay si ka badan sidii hore”in dhaxalsugaha Sacuudiga uu masuul ka ahaa.
Waxa uu intaa ku daray in Mareykanka ay qasab tahay”in ay diraan farriin cad oo ah in ficilada noocaas oo kala ah aan la aqbali Karin marka la eego marxaladda uu maanta caalamka marayo”.
Sanatar kale oo lagu magacaabo , Bob Corker, ayaa wariyayaasha isna u sheegay: “in aysan maskaxdiisa wax su’aal ah uga jirin in dhaxalsuge Maxamed Binu Salmaan uu amray dilka.”
Sanatar Bob oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa intaa ku daray “in haddii maanta Binu Salmaan la horkeeni lahaa garsoore in 30 daqiiqa gudahod dambiga loogu heli lahaa.”
Ilmihii u horreeyay ee ku dhasha makaan ay ku tabarucday hooyo dhimatay